Mujaahid C/llaahi Askar Oo Si Heer Qaran Ah Loogu Aasay Hargeysa Iyo Taariikhda Qisada Dhacdadii Mucjisada Ahayd Ee Hawlgalkii Birjeex | Araweelo News Network (Archive) -
images/stories/xuska taalada hawgalkii birjeex.bmp Hargeysa (ANN)Alle ha u naxariistee waxa shalay magaalada Hargeysa ku geeriyooday Col. Cabdilaahi Askar Barkhad oo ka mid ahaa Saraakiishii Milateri ee Urur-kii Xaq u dirirka ahaa ee SNM ee ka xoreeyey dalka Somaliland taliskii dhiigyacabka ahaa ee Maxamed Siyaad Barre (Afweyne), isla markaana xilal kala duwan kasoo qabtay hogaankii dhinaca Milateriga ee SNM.
Col. Cabdilaahi Askar, waxa shalay galab si heer Qaran ah loogu aasay Xabaalaha Sh. Muuse Ducaale ee duleedka Koonfur Galbeed ee caasimada Hargeysa. Waxaana aaska marxuumka ka qayb galay madaxweynaha Somaliland masuuliyiin kale iyo boqolaal ka mid ah shacbiga Somaliland, iyadoo uu Bud dhigay Mujaahid Muuse Biixi Cabdi.
Hadaba taariikhda noloshii mujaahidka iyo qisadii cajiibka ahayd ee hawlgalkii taariikhiga ahaa ee ay koox mujaahidiin ahi kagala bexeen Bir jeex April 1983 ayaynu si kooban ugu daalacaynaa qormadan.
Dhinaca kale Abwaan Aadan Tarabi, oo maanso uu ugu magacdaray Badjeex ka tiriyey xilligii hawlgalkii Bir-jeex ee miiska saraakiisha waxa ka mid ahaa tuducyadan:-
Waxay baaxad iyo Baaruud halkaa kasoo Buuxiyeen
Balantoo ahayd beri inay dilaan baa askar lagala baxay
Badh-badhaadhaydii ba’anay baa xigtee
Habeenkii fiidkii markii hawlgalka ay kula baxeen Mujaahid C/llaahi Askar ee aan ogaaday, aniga oo aan xoolahaygii iyo lacag meel ii taalay oo shaqadii aan ku noqon, markii aan ogaaday in hawlgalkaas bir-jeex dad loo xidhxidhay ayaan tagay guri Jameecada ku yaala halkaas ayaan u hoyday oo gurigaygii umaan hoyan, ka dib laba maalmood ayaan sii joogay Hargeysa sidaas ayaan kaga daba talaabay, waxay faqashtii ka dib bilawday inay xaasaskii xidhxidho aniga gabadhaydii way xidhay, xaaskii Ibraahin Koodbuur way xidhay dhibaatadaas ayay gaadhsiiyay maatadii C/llaahi Askar Barkhad Alle Ha u naxariistee waxa uu ahaa oo aan ku aqaanay geesinimo, Nin qiime leh, daacad ah dhamaan mujaahidiintii dhimatay alle ha u naxariisto .
Sidoo kale Mujaahidiin waawayn oo iyagu shalay ka qayb galay aas qarameedkii loo sameeyey Mujaahidkii waynaa ee Marxuum C/laahi Askar ayaa iyagu dhamaantood shacbiga iyo eheliyadii Marxuumkaba ka tacsiyadeeyey, kana hadlay wixii ay ka yaqaaneen Marxuum C/laahi Askar, ugu horayna C/laahi Xuseen Iimaan (Dirawal) oo isagu ka hadlaya aqoontii uu u lahaa Mujaahid C/laahi Askar, waxa uu yidhi “Alle ha u naxariistee Marxuum C/laahi Askar waxa uu ka mid ahaa tiirarkii ugu waawaynaa ee ay ku taagneyd SNM, waxa uu ahaa haldoorkii ummadan, xiligii halgankii iyo wakhtigan xaadirka ahba, waxa uu ahaa nin cibaado sax ah oo danta dadka ka hormarayi dan walba oo uu leeyahay, waxa uu ahaa nin wadaniyad ay ku xididaysatey, run ahaantiina waxaan odhan karaa maanta Somaliland shacbigeeda waxa ka baxay halyey qaran, waxaanan Ilaahay uga baryeyaa in uu naxariistii jano ka waraabiyo ehelkii, qaraabadii, asxaabtii iyo ummada reer Somaliland-na samar iyo iimaan ka siiyo”.
Waxa isaguna madashaa aaska ka hadlay Mujaahid Cali Guray, waxaana ka mid ahaa hadaladiisii “Inaalilaahu wa inaalilaahu raajacuun, Alle ha u naxariisto oo ha u nuuriyo xabaashe waxa maanta aynu u joognaa halkan aaskii Mujaahid C/laahi Askar Barkhad oo aynu ogayn halkii uu kaga jiray taariikhdii halgankii SNM, waxa uu ahaa marxuum C/laahi Askar mid ka mid ah baalashii ay duuli jirtey SNM, waxan Ilaahay uga baryeyaa nin xaq u dirir ah buu ahaaye in uu Iilka u nuuriyo oo uu janatul fardaws galo”.
Hadaba hadii aynu si guud u dulmarno taariikhdii halkii mujaahidkii waynaa ee Mujaahid C/laahi Askar (AHN) oo shalay si heer qaran loogu aasay waxa aanu taariikhdaas ka soo qaadanay wakhtigii la xidhay Alle ha u naxariistee Mujaahid C/laaahi Askar Barkhad iyo la bixitaankiisii iyo macluumaad kale oo badan.
Cabdilaahi Askar oo ay waqtigaa wada socdeen Cabdisalaan Turki oo hawl ciidan u yimi Hargeysa Bishii April 1983 ayaa goor habeen ah lagu qabtay meel Woqooyiga ka xigta Sinimoogi hore ee Hargeysa ee loo yaqaanay National Cinema, Waxa la qabtay Cabdillahi Askar habeenimadii ay Bisha April ahayd 8-da. Cabdilaahi Askar habeenkaa waxa lagu xidhay oo lagu hayay xaruntii xisbigii Hantiwadaaga Kacaanka Sooamaliyed ee Woqooyi-Galbeed oo ahayd halka immika ay ku jirto Madbacadda Qaranku. Subaxnimadiina waxa loo gudbiyay Taliskii Qaybta 26aad oo uu markaa Taliye ka ahaa gacan ku dhiigle la odhan jiray Gaanni. Marxuum Cabdilaahi Askar (AHN) markiiba waxa lagula dhaqaaqay silic-dil iyada oo la mariyay jidadkii xanuunka ee dooxatadii Siyaad Barre ku caan baxday si warar iyo sir ururka SNM leeyahay looga helo Laabatooyinka jidhkiisa oo dhana shamac ayaa lagu gubay oo lagu dhalaaliyay.
Taladu tiisa oo keliya maahe tii Alle iyo tii Mujaahidiintuna meel ayay sii taalay, intii uu Marxuum Cabdilaahi xidhnaaba waxay Mujahidiinti guduhuna gorfaynayeen sidii ay ula soo bixi lahayeen Cabdilaahi Askar, 11-kii April 1983-kii ayay Hurin ka tirsan Naftood hurayaashii SNM ee gudaha ku sugnaa oo uu horkacayay Ibrahim Ismail Maxamed oo loo yaqaanay Koodbuur ay goor casar ah soo kaxaysteen laba Baabuur oo Toyota ah oo iyago oo dhan Kow iyo Toban Mujaahid. Haddaba bal aynu eegno sida uu dhacdadan Aadan Maal oo aanu mudo hore waraysanay uga sheekaynayey waxanu ku bilabay sheekadii sidan:-
Mujaahid Aadan Maal Caqli waxa uu intaa ku daray “Gurigii Jeelka dabadiisa ku yaalay ayaanu ka dhaqaaqnay. Halkan imika Ibrahim dheere uu ka dhisayo Masaajidka halka ka soo horjeeda ee Dugsiga Sh.Baraawena Galbeedka ka xigta ayaanu kaga dhacnay wadadii. 5:25 pm daqiiqado ayaanu dhaqaajinay oo cidhib barako leh ku dhufanay. Ku talagalku waxa uu ahaa inaanu marno wadad dhaqtarka ka damabaysa oo aanu kasoo laabano Sheekh Ibrahim Biliso halkii uu ku jiri jiray ka dibna aanu hormarno Tubatariyada, oo sidaa miiska sarakiisha ku tagno.”
Gaadhkii maxay yeeleen, “Nimankii Gaadhka ahaa nin ka mid ah ayaa markiiba Beerka dhigay meel dhir leh oo xas dhexdii ah kaas oo aanu moodaynay inuu dhaawacanyahay oo Xabbadi ku dhacday, Ninkaasaa naga dilay Biixi Xaaji Xasan isla markaana Xabbado nagaga dhuftay Baabuurkii. Ninkaa mooyaane intii kale ee Gaadhka ahayd hal nin oo kale ayaa Xabbado ridayey kaas oo ka mid aha kuwii Albaabka taagnaa, Ninkaas ayaa dhibaatadaa noo geystay, sideedayadii gudaha galay hawhsu way noo kala qaybsanayd Ibrahim Koodbuur iyo Cabdisalaan Turki xilkoodu waxa uu ahaa inay Cabdilaahi Askar Qufulka ka jabiyaan oo ay soo qaadaan, waayo waxa na loo sheegay in uu lugaha iyo gacmahaba ka xidhan yahay. Dirawalka oo baabuurka ka masuul ahaa oo aanay ahayn inuu ka dego, haddii uu ka dego oo uu hawlgalanaa aanu ka fogaan dhakhsana ugu soo noqdo. Waxa aanu ku soo hadhnay Shan Mujahid Anagana hawshayadu waxay ahayd khaarajinta Gaadhka iyo ilaalinta Ibrahim Koodbuur(Ilaahay ha u naxariistee), Cabdisalaan Turki iyo Marxuum Cabdilaahi Askar (AHN) dhamaantoodbee.
Shantayadii dagaalamaysay markiiba laba ayay ku dhacday Kuwaas oo ahaa Biixi Xaaji Xasan iyo Siciid, waxaanu ku soo hadhnay saddex Siciid isagu dhaawicii gaadhiga kalamuu soo dagin, Biixi waanu is agtaagnayn oo bidixda ayuu iga xigay, markii ay ku dhacday ayaan arkay ninka toogtay inuu yahay ninkan xaska dhex rafanaya.”
“Ibraahim koodbuur waxa uu ku muusanabayay “ Waar raga laayayaay…waar raga laayaay”. Saddex Albaab ayaa isku dhejisnaa oo meesha ka soo jeeday Cabdisalaan Turkina Albaabkii bidixda xigay ayuu jebiyay Markii uu Albaabkii jebiyay ayuu yidhi kuma jiro, markasaan ku idhi “Waar ka Midigta, Waar ka Midigta. Wuu ku orday Gacanta ayuu ula tagay, Cabdilaahi Askar markaa waxa uu bilaabay qaylo. Waxa uu laha “Waar Waa Ikan..Waar Waa Ikan…Waar Waa Ikan”.
Dadka Marxuum Cabdilaahi Askar ku dhowdhowi waxay sheegaan in nabaradii maalintaa lagu dhuftay Cabdilaahi ay wali ka muuqdaan Jidhkiisa, Mujaahid Aadan Maal waxa uu intaas ku daray “Markii uu soo baxay ayaan is hor taagay Aniga oo ka soo jeestay xaggii daaqadaha, waxa aan ku idhi Waar Baabuurka fuul, Waar baabuurka fuul Anigii ayuu iga shakiyay, Ibraahim iyo Cabdisalaan oo uu soo dhaafay ayuu ku yidhi “Waar ma Baabuurka ayaan fuulaa !! “, Ibraahim ayaa la hadli waayay markasaan Ibraahim ku idhi “Waar Baabuurka fuul dheh”, Ibrahim ayaa u ishaaray inuu Baabuurka fuulo, xaggii Baabuurka ayuu u laabtay oo dhinicii Dirwalka ayuu soo maray. Dhinaca kale mar oo ka soo gal ayaan ku idhi, Ibraahina Baabuurkii ayuu la fuulay Shidhkii, Siciid Cabdi Yaasiin oo Baabuurka wadayna ma ahayn inuu ka dago, balse inuu saarnado ayay ahayd. Aniga iyo Cabdisalaan Turki ayaa ku dhaqaaqnay Biixi Xaaji Xasan oo dhaawacnaa, Siciid oo isna dhaawac ahaa, xabbadu waxay ku dhacday isagoo Baabuurka saaran oo kalama uu soo degin.
dhawr goor ayaa degdega awgii baabuurku naga dhaqaaqay oo hadana noo joogsaday oo hadana dhaqaqay. Baabuurku in door ah ayuu naga go’ay oo Albaabkii laga baxayay ayuu ku dhawaaday, Annaguna dhaawicii Biixi ayaanu daba sidnay. hadadna wuu dhaqaaq oo noo joogsaday. Biixi Xaaji Xasan aad ayuu u dhawacnaa oo naftuba waa ay kasii gurmaysay. Waxa uu nagu yidhi “Waar Annigu dhintaye yaan Baabuurku idinka tegin”. sidaa ayaanu Baabuurkii ku fuulnay, Biixina markii aanu tagnay naftuba way ka baxday oo nolol laguma soo gaadhin.”
Alle naxariistee Muj. C/laahi Askar Barkhad waxa uu ifka kaga tagay saddex wiil, laba gabdhood iyo xaas.
haddii ay noo suurta gasho waxaanu isku deyi doonaa in aanu idiin soo gudbino Muj. C/llaahi askar oo ka waramaya dhacdadaa markii u horaysay ee uu ka sheekeeyo sidii xaaladu ahayd sidii loo qabtay iyo hawlgalkii lagula baxay, iyadoo sida ka muuqata sawirka uu ka sheekeeyay maalintii la sameeyay xuska taaladaa lagu xusayay mujaahidiintii hawlgalka fuliyay, taas oo aanu ka baadhi doono kadkayaga Taariikhda iyo dhacdooyinka.